Puntland oo maalin kadibdhacday xuska maalinta ciidamada xooga dalka Soomaaliya!!! (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Puntland oo maalin kadibdhacday xuska maalinta ciidamada xooga dalka Soomaaliya!!! (Sawirro)
Garowe – Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa maanta magaalada oo ah 13-ka April 2014 magaalada Garowe ku qabtay xuska sanadguuradii 54-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidamada xooga dalka Soomaaliya oo la unkay 12-kii April, sanadkii 1960-kii.
Maamulka Puntland ayaan shalay qaban xusaka munaasabadan, wuxuuna qabtay maanta oo 13-ka April, islamarkaana aan aheyn maalinta la xuso sanad guurada ciidamada xooga dalka Soomaaliya, waxaana dad badan la yaabeen sababta keentay in maamulkaasi badelo maalinta loo asteeyey xuska ciidamada dalka.
Lama sheegin sabab kaliftay in maamulka Puntland maalin aan aheyn 12-ka April uu xuso maalinta ciidamada xooga dalka, dadka qaar ayaa aaminsan iney tahay fududeysi, halka qaar kale aaminsan yihiin in maamulkaas ka waqti bedelanayo dowladda Federaalka ah oo uu hoos yimaaddo, hase ahaateen uu ula dhaqmo sida dowlad barbar taagan.
Waxaa tilaabo wanaagsan oo meesha ka muuqatay lagu tilmaami karay, iyadoo calanka Soomaaliya uu ka muuqaal sareeyey calanka maamulkaas oo inta badan munaasabadaha ay u muuji jireen sida calanka dalka oo kale ama maraca qaar ay kan gaarka ah ay ahmiyadda weyn siin jireen.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa xuska sanadkaan u sameeyey qaab dhuulatus, waxaana gaardiska ka qeybqaatay ciidamo aad u farabadan, muuqaal ahaan ka habeysan sidii lagu yaqaannay ciidamada maamulka Puntland.
Madaxda sar sare ee maamulka Puntland oo uu horkacayo madaxweyne ku xigeenku C/xakiim C/llaahi Cumar Camey ayaa ka qayb-galay munaasabada oo ka dhacday xerrada 54-aad. Madaxweynaha maamulka C/weli Gaas ayaan munaasabadda joogin, wuxuuna ku maqan yahay degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar oo hadal ka jeediyey munaasabada wuxuu mar kale hanbalyo u diray ciidamada qalabka-sida ee Soomaaliya, wuxuu sheegay in xukuumadiisa ay ciidamada muhiimad siin doonto.
Eng. Cameey ayaa carabka ku dhuftay in ay qorsheeyeen in lacag la’aan waxbarashada looga dhigo ardayda dugsiyada hoose iyo dhexe ee askarta dowladda, taas oo ah fursad wayn oo caruur badan ka faa’iidaysan doonaan.
Shalay oo aheyd 12-ka April ayaa maalinta ciidamada xooga dalka laga xusay Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka, waxaana ciidamadu wadooyinka Muqdisho qaarkood ku mareen socod.
Children died of malnutrition, illness in IDP camp outside Mogadishu